2-1Sagrada Familia Apartment SPB212388
EBarcelona, Catalunya, Spain
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguAlbert
Ifulethi elitsha elihlaziyiweyo elinefanitshala yanamhlanje ekumgangatho ophezulu, iTV yescreen esicaba, uqhagamshelo lwe-Intanethi yeWi-Fi kunye nekhitshi langoku nelipheleleyo. Kukho yonke into oyifunayo ukuze uhlale ngokugqibeleleyo. Isiseko serenti: Indlu yonke okanye ifulethiInani lamagumbi okulala: 2; Inani lamanye amagumbi aneebhedi: Ikhitshi eli-1: Ikhitshi lixhotyiswe ngokupheleleyo ngezixhobo zala maxesha: ihob, ifriji kunye nemicrowave. Inayo yonke into oyifunayo ngeeholide.Igumbi lokuhlala: Igumbi lokuhlala / lokutyela libanzi kwaye likhanyayo. Kukho ibhedi yesofa ekhululekile yokuphumla emva kosuku lokubukela. Ibhedi yesofa iguqulelwa ngokulula kwibhedi eyongezelelweyo kabini. Amagumbi okulala: Igumbi lokulala elikhulu linebhedi ephindwe kabini. Amanye amagumbi okulala amabini aneebhedi zomntu omnye. Onke amagumbi anamagumbi amakhulu.Igumbi lokuhlambela: Igumbi lokuhlambela lixhotyiswe ngokupheleleyo ngeshawa, ifanitshala yegumbi lokuhlambela kunye nesinki yanamhlanje.Sikunika iWiFi yasimahla ngexesha lokuhlala kwakho!
Le ndlu isandula ukulungiswa. Ifumaneka kwisithili sase-Eixample saseBarcelona kunye nemizuzu emi-2 ukusuka kwiSagrada Familia, ifulethi lilungele bonke abafuna ukwazi isixeko.
-Igumbi lokulala eliphambili linebhedi eyi-160x190cm, kukwakhona ukuba kubekho iibhedi ezimbini ezingatshatanga ngesicelo sondwendwe. Igumbi likwanezifudumezi, ukukhanya kwendalo kunye nekhabhathi enkulu.
-Igumbi lokulala lesibini liquka ibhedi ye-90x190cm, i-wardrobe kunye nokukhanya kwendalo kunye nokufudumala
-Kwigumbi lokuhlala unokufumana i-sofa, ithelevishini kunye nesathelayithi, ebandakanya iziteshi zamazwe ngamazwe kunye noxhumo lwe-WI-FI olunika umqondiso kuyo yonke indawo yokuhlala. Kwigumbi lokuhlala kukho i-air conditioning, enceda ukugcina ubushushu obuhle kuyo yonke indawo.
-Ikhitshi lixhotyiswe ngokupheleleyo ngefriji, imicrowave, idishwasher, umatshini wokuhlamba, umatshini wekofu weNespresso capsule kunye nazo zonke izitya kunye nezitya ezinokufuneka. Indawo ikwabandakanya itafile enkulu ukusuka apho unokonwabela iimbono zeSagrada Familia.
-Igumbi lokuhlambela lineshawa ngamanzi ashushu azenzekelayo kunye negumbi apho unokugcina zonke iimpahla zakho zobuqu. Ikwanesixhobo sokomisa iinwele, ijeli yokuhlamba kunye neshampu.
4.72 · Izimvo eziyi-92
Izimvo eziyi-2 647
Inombolo yomthetho: HUTB-011315
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-R3638